Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo maanta xiran | Baydhabo Online
Wadooyinka Magaalada Muqdisho oo maanta xiran
Dowladda Somaliya, ayaa xalay ciidan wata gaadiidka dagaalka soo dhoobtay wadooyinka Magaalada Muqdisho, kuwaa oo la soo sheegayo in ay hakad geliyeen isu socodkii gaadiidka.
Wadooyinka ugu muhiimsan Bartamaha Magaalada Muqdisho, ayaa waxaa saakay lagu arkayaa ciidan isugu jira Boolis, Nabadsuggid iyo Militari, iyadoo aad arkeyso in wadooyinka ay ku jareen baabuurta dagaalka.
Tallaabada hakadka lagu geliyay isu socodka gaadiidka, ayaa waxay ka dambeysay, iyadoo maanta Magaalada Muqdisho laga xusayo 57 guuradii ka soo wareegatay aas aaska Ciidanka Xoogga Dalka.
Barnaamij goos goos ahaa oo xalay ka baxay Radiyaha Dowladda, ayaa shacabka looga codsaday in ay maanta iska dulqaataan, sababo ku aadan joojinta gaadiidka oo lagu suggayo nabadgelyada xuska maalintii la aas aasay Ciidanka Militariga Somaliya.
Wasiirka cusub ee Gaashaandhigga, C/rashiid C/laahi Maxamed oo u hambalyeeyay Ciidanka Xoogga, ayaa dhinaca kale u sheegay in shaqo culus ay u taalo, oo ay ugu horeyso in dalka ka sifeeyan nabadiidka.
Wasiirka, ayaa Alle ka baryay in sanadkan midka xigga uu dalka gaarsiiyo amni, horumar, midnimo qaran iyo Somaliya oo dib ugu soo laabata saaxada horumarka.
Dhanka kale Suxufiyiinta Magaalada Muqdisho, ayaa waxay soo sheegayan in dadka la arkaayo iyagoo lugeynaya, waxayna u muuqataa in ay aqbaleen codsiga kaga yimid dowladda.
Muqdisho, ayaa waxaa maalmihii la soo dhaafay ku soo xoogeysanayay weerarada, ay ka gaysanayan xubnaha ka tirsan maleeshiyada Al Shabaab.